उत्खनन् गर्दा पुरातत्वविद्ले जब अंगालोमा बेरिएको अस्थिपञ्जर देखे….. « Nepal Bahas
उत्खनन् गर्दा पुरातत्वविद्ले जब अंगालोमा बेरिएको अस्थिपञ्जर देखे…..
प्रकाशित मिति : ९ भाद्र २०७८, बुधबार १६:०५
९ भदौ ‘बेइिजिङ’, एजेन्सी । चीनका पुरातत्वविद्हरुले पन्ध्र सय वर्षअगाडि पुरुष र महिलालाई एउटै चिहानमा गाडेको अस्थिपञ्जर फेला पारेका छन् । दुबै जनाको अस्थिपञ्जर अंगालोमा बेरिएको अवस्थामा देखिन्छ ।
मृत्यु हुने बेला पुरुष २९ देखि ३५ वर्ष भएको र उनको पाखुरा भाँच्चिएको, दाँया हातको चोर औला नभएको पुरातत्वविदहरले अनुमान गरेका छन् । त्यस्तै, मृत्यु हुने बेलामा महिलाको उमेर अन्दाजी ३५ देखि ४० वर्षसम्मको हुन सक्ने र उनले बायाँ हातमा औँठी लगाएको अनुमान गरिएको छ । चीनको सान्सी प्रान्तमा माटो खन्ने क्रममा उनीहरुको संयुक्त चिहान देखिएको हो ।
महिला र पुरुषको एउटै चिहानमा कसरी अन्त्यष्टि भयो भन्ने बारेमा प्रष्ट हुन सकेको छैन् । आफ्ना मृत श्रीमानको पीडाले महिलाले पनि देह त्याग गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तो चिहान चिनियाँ इतिहासमै पहिलो पटक भेटिएको बताइएको छ । चिहानले चीनको नर्थ वी वंशले शासन गरेको समय ९३८६–५३४ एडी० मा प्रेम र त्यागलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनाइएको छ ।
चिहानको तस्बिरले ‘पहिलो सहश्राब्दीको समयमा चिनियाँ संस्कृतिको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र प्रेमको सक्रीय खोजी’ लाई उजागर गरेको अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।
‘अन्तिम संस्कारको अभ्यास पश्चिमा सस्कृतिबाट प्रभावित भएको ह्न सक्छ’ अनुसन्धानकर्ताहरुले भनेका छन् । चिहानमा मानिसको मायाको आवेगको अनौठो प्रदर्शन झल्किएको छ । चिहानको अस्थिपञ्जरले उत्तरी चीनमा त्यतिबेला प्रेमप्रति मानिसको धारणाको दुर्लभ दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्ब गरेको छ । चिहाननजिक केही माटाका सामाग्री पनि फेला परेका थिए ।
गायिका इन्दिरा जोशीसँग इंगेज्मेन्ट गर्ने को हुन् शरद केडिया ?
गैंडालाई हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरिएको तस्विरले पायो आइजी नोवेल !
वर्ष ४०, सन्तान ६९ ! कसरी सम्भव भयो ?
टिकटक भिडियो बनाउँदा नौ तलाबाट खसिन् युवती
राष्ट्रियसभा : आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित
नयाँ बसपार्कमा टिकट लिने यात्रुको चाप [ फोटोफिचर ]
अल्पसंख्यक छन्त्याल समुदायको मल्कबाङ गाउँ